१८ वर्षे किशोरीको स्थायी बन्ध्याकरण : १३ मा बिहे, १४ मा पहिलो र १७ वर्षमा दोस्रो सन्तान | NiD - News
कर्ण चन्द, नयाँ पत्रिका डोटी, फागुन ११, २०७४
कानुनले विवाहका लागि न्यूनतम उमेर २० वर्ष तोकेको छ । तर, डोटीकी एक किशोरीले १८ वर्षमै दुई सन्तान जन्माएर स्थायी बन्ध्याकरण पनि गरेकी छिन् ।
सानै उमेरमा बन्ध्याकरणका लागि आएको देख्दा जिल्ल परेको जिल्ला अस्पताल डोटीका डा. गिरिश अवस्थीले बताए । ‘सुरुमा त आफन्तको बन्ध्याकरणका लागि साथमा आउनुभएको होला जस्तो लागेको थियो,’ डा. अवस्थीले भने, ‘उहाँले आफ्नै बन्ध्याकरण गराउन आएको बताएपछि अचम्म लाग्यो ।
’सानैमा विवाह गरेर एउटा गल्ती त भइहाल्यो, धेरै बच्चा जन्माएर अर्को गल्ती नहोस् भनेर अहिले नै अप्रेसन गरेकी हुँ : मनीषा बोहरा